ओछ्यानमा के गर्न हुँदैन ? - माडी खबर
माडी खबर calendar_today २० असोज २०७८, 12:12 am
काठमाडौं । भनिन्छ, हरेक व्यक्तिको नीजि जीवन ओछ्यान मै विकसित हुन्छ। ओछ्यानलाई आकर्षक, लोभलाग्दो तथा विशेष बनाउनका लागि थोरै कुराहरुमा ध्यान दिए पुग्छ।
ओछ्यानमा हरेक व्यक्तिले जीवनको करिब एक तिहाइ समय बिताउने भएकाले पनि यो कोठाको आफ्नै विशेष महत्व हुन्छ। ओछ्यानलाई हामीले केवल सुत्‍ने कोठाको रुपमा मात्र लिनु हुँदैन। ओछ्यानलाई उर्जाको स्रोत तथा मानसिक शान्ति प्राप्त गर्ने स्थानको रुपमा समेत विकसित गर्न सकिन्छ। यदि यसो गर्न सकियो भने हामीले हाम्रो जीवनमा धेरै प्रकारका सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छौं। हामीले हाम्रो सम्पूर्ण थकान तथा चिन्तालाई बिर्सने ठाउँ पनि ओछ्यान हो।
ओछ्यानमा गर्न हुँदैन?
ओछ्यानलाई स्टोर बनाउने गल्ती गर्नु हुँदैन। ओछ्यानको मुन्तिर कुनै प्रकारको सामान राख्नु हुँदैन। ओच्यानको वरपर किताब अथवा अन्य अनावश्यक सर- सामान राख्नुहुँदैन।
ओछ्यानमा टिभी, स्टडी टेबल आदि राख्नु हुँदैन। यसबाट मानसिक शान्ति र शारीरिक आराममा नकारात्मक प्रभाव पर्छ।
ओछ्यानमा काम, व्यवसाय, आर्थिकसम्बन्धी काम गर्नुहुँदैन।
ओछ्यानमा पूजा गर्ने स्थान हुनुहुँदैन।
ओछ्यानमा पानी र पहाडको फोटो राख्नु हुँदैन। किनकि यिनले अनिद्रा बढाउन भूमिका खेल्छन्। साथै यस्ता फोटोले दुर्भाग्यलाई निमन्त्रणा गर्ने आम मान्यता छ।
ओछ्यानलाई भित्तामा टाँसेर राख्नुपर्छ।
कोठाको बिममुनि सुत्‍नु हुँदैन। यो स्वास्थ्य र सम्बन्धका लागि ठीक हुँदैन।
ऐना अगाडि ओछ्यान राख्नु हुँदैन।
श्रीमान्- श्रीमतीको ओछ्यानमा खेलौना, डलहरु राख्नुहुँदैन। बेडका यी कुराहरूले श्रीमान्- श्रीमतीको आपसी सम्बन्धमा दूरी बढाउने कार्य गर्छन्।
पूर्व अथवा दक्षिण दिशातर्फ मुख फर्काएर सुत्‍नुपर्छ। पूर्वतर्फ शिर फर्काएर सुत्‍नाले विद्या तथा दक्षिणतर्फ शिर फर्काएर सुत्‍नाले धन र आयुको वृद्धि हुन्छ।
ओछ्यान लाई कसरी राख्‍ने?
तन्‍नालाई हप्तामा एक पटक धुनुपर्छ।
ओछ्यान हावा चल्ने र सुगन्धित बनाउनुपर्छ।
फोहोर र अव्यवस्थित कोठामा निद्रा आउने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसैले ओछ्यान लाईर् सफा तथा सुव्यवस्थित राख्नुपर्छ।
ओछ्यान संगै जोडिएको एट्याच बाथरुम सधैं सफा तथा ढोका बन्द गरेर राख्नुपर्छ।
ओछ्यान मा पर्दाको रंग भित्ताको रंगसित मिल्दो हुनुपर्छ।
सुगन्धले व्यक्तिको मुडलाई पनि राम्रो राख्छ। त्यसकारण ओछ्यान मा सेन्टेड क्यान्डल्स अथवा रुम फ्रेसनरको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। यी बाहेक केमोमाइलको केही थोपा पानीमा मिलाएर यसलाई स्प्रे बोटलमा भरेर छर्किनुपर्छ।
ओछ्यानलाई वातावरणमैत्री समेत बनाउनु पर्दछ। त्यसका लागि हरियो रंगको पर्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
जाडो हुन्छ भनेर ताताेपानीले नुहाउने बानी छ ? कपाल धुँदा…